Bekuqhilika izihlathi kuZinnbauer echazwe abePirates - Impempe
Bekuqhilika izihlathi kuZinnbauer echazwe abePirates
Uthobeke amanxeba ngezindlela eziningi ezahlukene umqeqeshi we-Orlando Pirates, uJosef Zinnbauer kulandela ukunqoba kwezakhe ngo 2-0 kwiMaritzburg United emdlalweni weDStv Premiership ngeSonto e-Orlando Stadium.
IBucs ize kulo mdlalo izihudula kulandela impoxo eyithole inenebulwa yiMamelodi Sundowns ngo 4-1 kwiNedbank Cup ngoLwesine ntambama.
Ngemuva kwalo mdlalo iPirates ibe yinhlekisa izwe lonke kwazise ishaywe kwacaca ukuthi ayinazo izimpendulo.
Akazange akufihle ukuphoxeka kwakhe umqeqeshi wePirates wakucacisa ukuthi sebezoqinisa kwiConfederation Cup kanjalo nakwiligi lapho befuna ukuqeda khona bephezulu kunala bekhona manje.
Kufanele ukuthi uZinnbauer uye embhedeni kuqhilika izihlathi ngeSonto ebusuku kwazise uVincent Pule usuke ebhentshii washayela leli qembu amagoli amabili alibeke endaweni yesine kwilogi.
“Kuningi okungujabulisile kulo mdlalo. Umphumela nje uwodwa ungishaye ngaphakathi uma uzokhumbula esisuka kuwo kwiNedbank. Ngiyakubona konke kodwa umfana omncane uThabiso “Pepe” Sesane nguyena ongihlabe umxhwele,” kusho lo mqeqeshi.
USesane (20) oqokwe njengomdlali ovelele osukwini udlala kahle kanjena nje, kunemvunge ngefomu kaThulani Hlatshwayo kanjalo nekaHappy Jele. Bobabili bebengekho njengoba uHlatshwayo ebeqedela isigwebo samakhadi aphuzi, kanti uJele yena ulimele.
Ubeqala ukubonakala edlubhe umfaniswano weqembu elikhulu lePirates kwiDStv Premiership kodwa indlela adlale kahle nangokuziqoqa ngayo ubungaphika.
“Ubunzima lo mdlalo ikakhulukazi esiwombeni sokuqala lapho bebesixine khona ngamandla. Kungenxa yokusinamathela kwabo size saqala ukudlala into esile esiwombeni sesibili.
“Kukho konke kodwa uPepe (Sesane) nguyena ongigqamele kakhulu ngakho ngijabule ukuthi uphakamise isandla ngesikhathi edingeka wafike washaya into ecokeme.
“Ngineme ngomphumela ngoba uzokwenza sikhohlwe kancane okwenzeke sikhishwa iPirates kwiNedbank.
“Uma abafana abancane bedlala kahle kanje, nakanjani laba abathathwa njengabadala bazokwenza konke okusemandleni ukukhuphula amasokisi ngesikhathi esifanayo kusizakale iqembu. Ngineme ngokuningi,” kusho uZinnbauer obejabule impela.
Ngaphandle kukaSesane, uZinnbauer ujable ngabadlali abaningi esingabala kubo oBen Motshwari, Tshegofatso Mabasa, Paseka Mako noPule ongene walamula.
Previous Previous post: Ibhodlele kwiMaritzburg iPirates eyaphoxwa yiSundowns
Next Next post: Kubuye ukuzethemba kuWayde ewina umjaho